चुनाव हरुवा र पिछलग्गु कृष्ण सिटौलाको 'अक्षम्य अपराध', ओली र देउवाबाट के होला सजाय? Nepalpana - Nepal's Digital Online
बिहिवार, फाल्गुण १३ गते २०७७
२०७७, फाल्गुण १३ गते
# डा. राजेश अहिराज
चुनाव हरुवा र पिछलग्गु कृष्ण सिटौलाको 'अक्षम्य अपराध', ओली र देउवाबाट के होला सजाय?
Nepal Pana फाल्गुण ११ २०७७
काठमाडौं । अदालतमा मुद्दा चल्दै गर्दा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर प्रचण्ड माधवकै शैलीमा चर्को बोल्ने नेपाली राजनीतिका एक पात्र हुन् कृष्णप्रसाद सिटौला ।
नेपाली कांग्रेसमा गिरिजा प्रसाद कोइरालाको कृपा पाएर यहाँसम्म पुगेका सिटौलाले आफ्नो हैसियत समेत बिर्सिँदै अहिले प्रचण्ड नेपालको पिछलग्गु भएका छन् । विगतमा गिरिजाको पिछलग्गु भएर हाइट बढाएका सिटौला अहिले राजनीतिमा पदीय हैसियतमा जिरोमा छन् । एउटा चुनाव समेत जित्न नसकेर सांसद बन्न सकेका छैनन् । नेपाली जनताको चाहना विपरित धर्मनिरपेक्षता लादेर, सनातन धर्म मास्न र इसाई धर्म प्रवर्द्धनमा ठूलो भूमिका खेलेका सिटौला आफैले अस्पष्ट संविधान लेख्दा अहिले विघटनको परिस्थिति आएकोमा पक्कै जानकार छन् । तर चुनाव हरुवा तथा राजनीतिमा जिरोमा पुगेका सिटौला आफ्नो हाइट बढाउन पुनर्स्थापनाको स्टण्डमा लागेका छन् ।
यति त ठिकै थियो । तर सिटौला आफू राइज हुन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र आफ्नै पार्टीका सभापतिविरुद्ध निहुँ खोज्दै हिँडिरहेका छन् । नेकपाको घरझगडामा सिटौला प्रवेश गरेर कांग्रेसलाई पनि विवादमा तानिरहेका छन् ।
आइतवार प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव टेबल भएपछि सिटौलाले पार्टीको निर्णय विपरित कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने घोषणा गरिदिए । राई प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्र हुन भने अर्कोतिर सभापति देउवाले अविश्वासको सम्बन्धमा केही निर्णय गरिसकेका छैनन् । तर सिटौलाले पत्रकार सम्मेलन गरेर राईविरुद्ध कांग्रेसको आधिकारिक धारणा जसरी निर्णय सुनाएर ओली र देउवा दुबैसँग निहुँ खोजेका छन् ।
अहिले नेपाली राजनीतिमा देउवा र ओली एकै ठाउँमा छन् । पार्टी र संसदमा कुनै हैसियत नभएका सिटौलाले यो हस्तक्षेपको कस्तो परिणाम भोग्छन् त्यो आउने दिनमा स्पष्ट हुने नै छ ।
सभापति देउवाले नेतृत्वका हिसाबले राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव टेबुल हुन नदिन आफ्नो पार्टी पंक्तिलाई बैठक रोक्न आग्रह गरेका थिए । प्रदेश कमिटीले मानेन आफ्नो ठाउँमा छ । सभापतिले हैसियले आफ्नो तल्लो कमिटीसँग सल्लाह गर्ने, निर्देशन दिने, अनुरोध गर्नु सामान्य नै हो ।
सभापतिले बैठक गरेको आग्रहको झोकमा सिटौलाले अंहकार देखाउँदै पार्टीको निर्णय नै नभई अवैधानिक रुपमा पत्रकार सम्मेलन गरेर अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलले मतदान गर्ने घोषणा गरिदिए । जुन पार्टी र नेतृत्वलाई नै सिधै वाइपास थियो ।
देउवाले सिटौला जसरी शेरधन राईलाई बचाउनुपर्छ भनेर घोषणा गरेका थिएनन् । सल्लाह गरेका थिए । तर सिटौला प्रचण्ड नेपालको पिछलग्गु बनेर ओलीका मान्छेलाई हटाउन कम्मर कसेर लागे । र प्रचण्ड नेपाल समूहलाई सफल बनाएर प्रदेशको सत्तामा ल्याउन अघि सरे ।
सिटौलाले पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए, 'प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम असंवैधानिक र सर्वसत्तावादी हो भनेर दशौं लाख कार्यकर्ता हामीले सडकमा उतारेका छौं। हामी ओलीको नेकपालाई साथ दिने कल्पना कसरी गर्नसक्छौं? त्यसैले कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्नेछ। यसमा कुनै आशंका नगरे हुन्छ।’
यसो भनेर सिटौला पूर्ण रुपमा प्रचण्ड नेपालको पक्षमा त उत्रिए नै । साथसाथै शेरधन राईले नै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको करार पनि गरिदिए । विघटन त ओलीले गरेको हो, त्यसको सजाय प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधनलाई? त्यो पनि सिटौलाको अगुवाइमा अगाडि बढाइयो । ओलीले गलत गरेको हो भने हिम्मत भए ओलीलाई हटाए भइहाल्यो । तर कुनै हैसियत नभएका सिटौला प्रदेशको राजनीतिमा ठाडो हस्तक्षेप गरेर हिरो बन्न खोजेका छन् ।
यसरी सिटौलाले प्रचण्ड नेपालको डिजाइनमा मुख्यमन्त्री फाल्न लागेर पार्टीको विधान र नेतृत्वलाई क्रस गरेका छन् भने ओलीसँग अप्रत्यक्ष निहुँ खोजेका छन् । ओली समूहका भनाइमा यो अक्षम्य अपराधका लागि सिटौलाले ओली र देउवाबाट अलग अलग कस्तो दण्ड पाउँछन् त्यो हेर्न बाँकी नै छ । अब चुनाव आउँदैछ त्यसमा पनि यसको हिसाब किताब होला ।
सडककाे विषयमा विवाद हुँदा वडाध्यक्षमाथि हातपात
फाल्गुण ११, २०७७ मंगलवार ०९:४१:३६ बजे : प्रकाशित
सर्वोच्च अदालतले अकस्मात किन बोलायो प्रचण्डलाई ? यस्तो छ मुद्दा !
काठमाडौंमा भारत सरकारको ठूलो आर्थिक सहयोग, बन्ने भयो यस्तो संरचना
संसद पुनर्स्थापना भएसँगै भाजपा नेताले दिए यस्तो प्रतिकृया
'प्रधानमन्त्री ओलीको तत्काल राजीनामा'
अबका याेजना महेस बस्नेतले गरे सार्वजनीक, 'प्रचण्ड-नेपालले ‘गद्धारी’ गर्न खोज्दै'
पूर्वपश्चिम रेलमार्ग निर्माण अघि बढाइरहेका छौँ- प्रधानमन्त्री ओली
सबै दलसँग मिल्ने प्रचण्ड-नेपाल समूहको घोषणा !
भारत-चीन सम्बन्ध नयाँ मोडमा, सिजिनपिङले भारत भ्रमण गर्दै !
प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नेलाई ओली समूहको कडा जवाफ !
प्रचण्ड–माधव समूहका सांसदहरुलाई काठमाडौं नछोड्न निर्देशन, के हो संकेत ?
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि नेकपाले गर्याे यस्ताे निर्णय !